Lalaon-tsaina « Echec » :: Malagasy roa ambin’ny folo mianadahy hiatrika fifaninanana iraisam-pirenena • AoRaha
Lalaon-tsaina « Echec » Malagasy roa ambin’ny folo mianadahy hiatrika fifaninanana iraisam-pirenena
Mikarakara fifaninanana lehibe an-tambajotran-tserasera, hifanandrinana firenena telo amby enimpolo amby zato, eo amin’ny taranja « Echecs » ny Federasiona iraisampirenena na Fide, amin’ny 22 hatramin’ny 30 aogositra 2020. Hanana solontena roa ambin’ny folo mianadahy amin’io sehatra avo lenta io i Madagasikara.
Ramalanjaona Andrianantenaina no kapiteny mpitarika ny ekipam-pirenena malagasy, ahitana an-dRakotomaharo Fy sy Ranaivoharisoa Alain eo amin’ny sokajy lehilahy. Hisolo tena ny andriambavilanitra Ravelomanana Sabine sy Razafindrabiaza Christine ary Raharimanana Faratiana.
Ireo mpilalao efa zatra fifaninanana lehibe kosa no nosafidian’ny Federasiona malagasy ho an’ny sokajy latsaky ny roapolo taona (U20), toa an-dRazanadrakotoarisoa Toavina, Ramarolafy Gloria Grace, Nomenjanahary Fanilo ary Randriamaharo Mitia. Tsy tafiditra tao anaty lisitra kosa Ralison Harifidy, malagasy nahazo ny anaram-boninahitra « Maître international » farany sady tompondakan’i Afrika sokajy U16, tamin’ny taona 2017. Tsinjaraina diviziona efatra, araka ny filaharana maneran-tany, ireo ekipam-pirenena mandritra ny fifaninanana. Ao amin’ny diviziona fahatelo no misy ny ekipa malagasy miaraka amina firenena telo amby telopolo hafa.
Fihoaram-pefy :: Sesilany ireo fandikan-dalàna ataon’ny miaramila